Fundamentals of HR Management - PAÑÑĀ Online School
မိမိလုပ်ငန်းအတွင်းရှိ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်များအား နည်းစနစ်ကျကျ စီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် တို့အတွက် လေ့လာလိုသူများ၊ ယင်းဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် အခြေခံမှစ၍လေ့လာသင်ယူလိုသူများ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Membership နှင့် မဟုတ်ပဲ တစ်ဘာသာချင်းစီကိုတက်ရောက်သူဖြစ်ပါက လေ့လာကြည့်ရှူချိန်ကာလမှာ Quiz ဖြေဆိုချိန်အပါအဝင် (၂) လ ဖြစ်ပါသည်။သင်ခန်းစာ Video File များကို အစဉ်အတိုင်းလေ့လာပြီးရင် Quiz ကိုဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည် ။ Quiz ရမှတ်မှာ ၆၀ နှင့်အထက်ဆိုရင်အောင်မှတ်ဖြစ်ပြီး ၈၀ နှင့်အထက်ဆိုရင် ဂှုဏ်ထူးနှင့်အောင်မြင်သည်ဟုသတ်မှတ်သည်။အောင်မြင်ပါက ဒီ Course အတွက် Certificate ထုတ်ယူရန် Paññā Online School Facebook Page Messenger (or) 09443434463 ကိုဆက်သွယ်ပေးဖို့လိုပါအပ်ပါသည်။
U Wai Yan Win @Tyler River
Chief Consultant - River Consulting, HR Practitioner
A HR practitioner, Wai Yan Win @ Tyler River, who focus on talent management and talent development has more than five years of experienced at multinational companies. He is now working as Learning & ... More
Fundamentals HR Management for SMEs
Faculties : U Ye Lwin|;|8
ယခုပို့ချချက်သည် အသေးစား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အခြေခံကျသော လူ့စွမ်းအား ရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံအချက်များဖြစ်သည့့်စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံကိန်းချရန် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊ လိုအပ်သော လူ့စွမ်းအားကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ အကဲဖြတ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရေးအတွက် လေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ အလုပ်လုပ်ကိုင်ချင်စိတ် နှင့် လုပ်ငန်းအပေါ် အလေးထားလာစေရေး အတွက် လိုအပ်သော စိတ်ဓါတ်လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း နည်းလမ်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင် စည်းကမ်းသေဝပ်ရေး အစရှိသော လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု၏ အခြေခံသဘောတရား များကို မိတ်ဆက်ပို့ချပေးထားပါသည်။
ဤသင်ခန်းစာများကို နားဆင်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်သားများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ပိုမိုထိရောက် အောင်မြင်မှုများရနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
8 Video(s),5Reading(s)
01. Purpose of Business and 6MS View
02. Development Function
05. Performance Management And Staff Development (01)
06. Performance Management And Staff Development (02)
07. Performance Management And Staff Development (03)
08. Performance Management And Staff Development (04)
1HRM for SME (PDF)
2HRM for SME (PDF)
3HRM for SME (PDF)
4HRM for SME (PDF)
5HRM for SME (PDF)
Understanding Practice of HR & Organizational Part 1
Faculties : U Wai Yan Win @Tyler River|;|7
(1) Organization Management (2)
Organization Culture and Its Impact on Human Capital.
8 Video(s),2Reading(s)
01. Organizational Structure
05. Organization Culture
07. Motivation Theories
08. Motivation Hygiene Theory
Understanding Practice of HR & Organizational Part 2
1. Equal Empowerment Opportunities and Managing Employment Turnover
09. Equal Employment Opportunity
10. Discrimination - EEO
11.Discrimination Can Lead The Following
12. Managing Employment Turnover Rate
13. To Do Competency Frame Work
14. Additional Operation & Process Factors